Fihaonambe faha-13 ataon’ireo vadintany : ifanakalozan-kevitra ho fiarovana ny fananan-tany | NewsMada
Fihaonambe faha-13 ataon’ireo vadintany : ifanakalozan-kevitra ho fiarovana ny fananan-tany
Eto Antananarivo, nanomboka omaly hatramin’ny 12 avrily izao, ny fihaonambe faha-13 ataon’ireo vadintany aty Afrika. 120 ny mandray anjara avy amin’ny firenena 20 mampiasa teny frantsay, mifanaraka amin’ny CSNF(1) any Frantsa, ireo fikambanan’ny vadintany aty amin’ny Nosy manodidina sy eto Madagasikara.
Mifantoka amin’ny fanatontoloana ny adihevitra amin’ity taona ity : ny lalàna sy ny fanatontoloana, inona ny aterak’izay ? Ifanakalozan-kevitra ho fiarovana ny tombontsoan’ny fianakaviana amin’izao vanim-potoan’ny fanatontoloana izao ny fihaonambe toy izao. Ahoana ny fifandraisan’ny zon’ireo olona ireo sy ny fananany na ny lovany ? Inona ny lalàna ampiharina amin’izany iombonan’ireo vadintany ireo ? Niadin-kevitra ireo, notarihin’ny filohan’ny CNNM (2) eto Madagasikara, Razanadrakoto Rija, ny UIN (3) na ny fikambanana iraisam-pirenena misy ny vadintany, tarihin’ny filoha lefitra, Mohamed Tchassona Traore, sy ny CAAF(4), ahitana ny filohany, Achite Henni Abdelhamad.
Napetraka ny Bif any ambanivohitra
Raha eto Madagasikara, olana iray lehibe sedrain’ny maro ny fandovana tany na trano, matetika isehoan’ny fanararaotan’ny sasany, mahazo rariny any amin’ny fitsarana. Very zo, noho izany, ny fianakaviana mpandova, indrindra fa ny any ambanivohitra. Nandraisan’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany fepetra hamahana ireny olana ireny, araka ny lalàna nofaritana ny taona 2015, ny nananganana birao momba ny fananan-tany (Bif) any amin’ireo kaominina ambanivohitra. Amin’izao fihaonambe faha-13 izao, hotsidihin’ireo mpandray anjara ny Bif ao Behenjy, hizahana ny taratasy fanamarinana momba ny fananan-tany.
Samy maneho ny heviny daholo ireo mpahay lalàna, vadintany, mpampianatra any amin’ny Oniversite, avy amin’ny firenena maro aty Afrika sy eto Madagasikara mandritra ny atrikasa amin’izao fotoam-pivoriana izao. Mihatsara hatrany ny zava-bitan’ireo vadintany hatramin’ny nisian’ny fihaonambe toy izao, mitombo ny isan’izy ireo ary tsara fiarovana ny fananana. Nanamarika izany ny minisiteran’ny Fitsarana eto Madagasikara, amin’ny fanavaozana ny lalàna. Notsiahivin’ny minisiteran’ny Fitsarana fa mikirakira ny lafiny lalàna any akaikin’ny vahoaka ny vadintany.
Vadintany eto Madagasikara ( encadré)
Mbola azo lazaina tanora ny vadintany malagasy, 72 ry zareo izao, 12 monja tamin’ny 1999. Mbola tsy ampy ny vadintany eto Madagasikara.
Tetikasa roa amin’izao fotoana izao : fanamboarana fichier central sy tolo-dalàna.
Miezaka mampiroborobo ny asan’izy ireo ny minisiteran’ny Fitsarana.
Asa mifandraika amin’ny kolontsaina malagasy : misoroka ny fifanolanana eo amin’ny ady tany, na ny lova hafa, mikatsaka ny fampihavanana.
CSNF(1) : Conseil supérieur de notariat de France.
CNNM (2) : Chambre nationale des notaires de Madagascar.
UIN (3) : Union internationale des notaires.